''Himannaan kun duraanis dharaan kan kaa'ameedha'' - BBC News Afaan Oromoo
''Himannaan kun duraanis dharaan kan kaa'ameedha''
Image copyright Face book Jawar Mohammed
Goodayyaa suuraa Jawaar Mahammad
Abbaan alangaa Federaalaa buufatawwan TV teessumni isaanii biyya ambaa godhatan OMN fi ESAT akkasumas Obbo Jawaar Mahaammedfi Dr Birhaanuu Nagaairratti banamee ture adda kute.
Abbaan alangaa federaalaa himannaa mana murtii olaanaa federaalaatiif dhadhacha yakkaa 19ffaa kaasuusaa ilaalchisee xalayyaa barreefameen dhaabbilee fi namoota galmee himannaa Dr Mararaa Guddinaa jalatti argaman kanneen himannaan isaanii akka adda citu har'a kan gaafate yoota'u, manni mutichaas gaafficha fudhateera.
Jarreen kunneenis yakka sirna biyyaa fi heeraa humnaan diiguuf yaaluuf akkasumas bufataaleen telvisiin ammoo waamicha namoonni dabarsan fudhachuun garee shoroorkeessaaf deeggarsa taasisuun, yakka mummee irratti qooda fudhachuu jedhamuun yakka shororkessummaatiin himatamanii turan galmeen abba alangaa ibseera.
Namoota himannaan isaanii adda citee keessaa Direktara OMN kan ta'an Obbo Jawaar Mohaammadiin dubbiseera.
Image copyright FaceBook/ Getty
Akka isaani jedhanitti, ''himanni kun duraanis dharaan kan kaa'ameedha. Yakki nuti biyya irratti raawwanne tokkolleen hinqabnu. Sobumaan sagalee ummata Oromoo cufsiisuufi ummata hidhaati guruuf jecha kan yaadameedha,'' jedhaniiru.
Tarkaanfii isaaniis waan qabsoo ummata fi qabsoo qeerrootiin fashalaa'eef akka kana duraatti maqaa ummata keenya ukkaamsanii maqaa xureessuun akka hindanda'amne waan hubataniifi mo'amaniif himannaa kana haqan jedhu. Akkasumas qabsaa'ota Oromoo hedduun mana hidhaa keessa jiran akka bahan taasisaniiru.
''Kanaafis injifannoo guddaatu nutti dhagahama'' jedhaniiru Obbo Jawaar.
Aangawoonni mootummaa haraan humarra marii, humnarra waliigaluu, hunma irraa waliin mari'achuun waliigaluu wayya jechuun tarkaaniiffii amma fudhataniif ni galateefanna jedhaniiru.
Haa ta'u malee ammas labsiiwwan daangeesso ta'an kan akka labii farra shororkessummaa, midiyaa, dhaabbilee miti mootummaa fa'i fooyyeessuu labsii dimokraasii dagaagsanii bakka busuun isaan hafa jedhaniiru.
Gama dhiibbaan himannaa kanaa yoo dubbatanis, ''dhaggeefataa keenya biyya jirurratti sodaa umuudhaan, dorsiisuufi yakka isaan hinraawwatiiniin yakkuuf yaadamee kan qophaa'e waan turef heduun ittiin miidhamaniiru,'' jedhaniiru.
Akkasumas dhaabilee biyya alaa nu waliin hojataniifi biyyoota waajjiraaleen keenya keessa turanrrattis dhiibbaa adda addaa taasisu bira taruun dhaabisiisuuf maallaqa guddaa itti dhangalaasaa turan. Garuu wanti qabatamaan anas ta'e OMN irra gahee hinjiru, jedhaniiru.
Akkuma himannaa kana kaasanittis yoo labsiiwwan daandeessoo kanneen kaasan, tarkaanfichi OMNfis ummtaafis gaariidha jedhu Obbo Jawaar.
Kana maleess labsiiwwan daangessoo ta'an kan akka labii farra shororkessummaa, midiyaa, dhaabbilee miti mootummaa fa'i yoo ka'an OMN biyya keessa galuu ummata isaa tajaajilu biratti waajira magaalota Oromiyaa garaa garatti banachu akka fadhulleen dabauun himaniiru.
Dhuguma motummaan bilisaan akka hojjataniif seera hojachiisu baasa yoo ta'ee, ''OMN hunda dura biyya galuun ummatasaa tajaajiluufi sochii biyya ijaaruuf taasifamu gargaaruuf qophaa'adhas'' jedhaniiru.